Ice Cream yekutengera
Big Ice Cream yekutengera
Hand Push Ice Cream yekutengera
Motocycle Ice Cream yekutengera
Small Ice Cream yekutengera
Fruit Tengesai Vehicle
Pasina Power Rv
Nhaka uye cohesion, kushanda zvakanaka uye kubudirira mune ramangwana
by musi May-Wed-2018
On May rechi12 uye rechi14, yose chikuru nhengo vaiita chikafu motokari vakabudirira vakabata 2019 nzira pagore uye kutarisirwa musangano. The Musoro Seminar uyu "Nhaka uye cohesion, kushanda zvakanaka uye kubudirira mune ramangwana", uye vakatsunga kukura nzira wekambani muna 2019 uye S. ...
Food inobatanidza nyika 11, chinonyanya yakavimbika zvokudya kushamwaridzana uyewo kukanda chinhu bazi yemiorivhi, itai chinhu!
On December 8, China (Shaxian) tudyo Tourism uye Culture Festival Nokufarisisa kwayo rechi20 rokuzvarwa. Kune vanosvika munyika 11 kubva munyika, kusanganisira France, Brazil, India, uye dzimwe nyika 11, apo zvokudya vakauya pamwechete yaBhaasha County, uye vanopfuura 100 dzakawanda uye Dj ...
Mashiripiti Food motokari Foreign Market R & D Department makasimbiswa uye yakasimbiswa.
With kuwedzera Mobile yokudyira motokari makambani uye chitarisiko zvigadzirwa, zviri Mobile yokudyira motokari tsika kuramba dzakakurumbira mhiri kwemakungwa. In idzva indasitiri pamusoro Mobile dzokudyira motokari, vaiita motokari zvokudya yagara inozivikanwa kuti Chinese vanhu. Ndicho tanga kambani kuti akapinda ...
Kuenda vanyura muchitoro motokari munda, kambani iri rakafuridzirwa Dubai yokudyira motokari uye zvino kambani aikoshesa anopfuura mamiriyoni 100!
Magic chikafu motokari dzaimera pamasikiro uye gadzira motokari yokudyira motokari, uye akawana magadzirirwo utsanzi femero kubva Dubai, yakakurumbira yokudyira motokari tsika guta nenyika. The motokari akaita zvakanga nyore kushandisa uye akanaka. The nyeredzi chigadzirwa kuti kambani akasika kwaikosheswa yaakakudza custo ...
Dubai Mobile Diner anowana Guangzhou International Food Festival
Imwe-nguva kushanya kuna Guangzhou International Food Festival pose Chiri pakupedzisira kuuya! ! ! Somunhu mukuru zvokudya Nei zvimba kurasikirwa ichi Gourmet chikafu denga? More chisingatarisirwi ndechokuti Zvinonzi chikafu marori mumigwagwa Dubai (Food Truck) Kunyange akazviratidza muna Guangzhou Internation ...